5 Key weebụsaịtị Metric Kategorien I Kwesịrị Inyocha | Martech Zone
Ọbịbịa nke nnukwu data ewetawo ọtụtụ mkparịta ụka dị iche iche banyere nchịkọta, ahia na ahia ahia. Dị ka ndị ahịa, anyị maara n’ezie mkpa ọ dị ịchụso mbọ anyị, mana anyị nwere ike ịba ụba n’ihe anyị kwesiri ịdebe na ihe anyị abụghị; ihe, na njedebe nke ụbọchị, anyị kwesịrị iji oge anyị na-eme ihe?
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ narị metrik anyị nwere ike ile anya, aga m agba gị ume ka ị lekwasị anya na ngalaba ọnụọgụ ọnụọgụ webụsaịtị ise wee chọpụta ọnụọgụ ndị ahụ dị mkpa maka azụmahịa gị:
WHO gara na ebe nrụọrụ weebụ gị.
N'IHI gịnị ka ha ji bata na saịtị gi.
OLEE otú ha si chọta gị.
G didN did ka ha lere anya.
Ebee ka ha si pụọ?
Ọ bụ ezie na edemede ise a dị mfe ihe anyị na-anwa ịlele mgbe mmadụ bịara na saịtị anyị, ọ bụ ihe mgbagwoju anya karịa mgbe anyị na-anwa ịchọpụta ihe metrik dị mkpa na ndị na-adịghị. Anaghị m ekwu na ịkwesighi ị attentiona ntị n'ọtụtụ metrics, mana dị ka ihe ọ bụla na azụmaahịa, anyị kwesịrị ibute ọrụ anyị kwa ụbọchị ụzọ, na n'aka nke ya, ịkọ akụkọ, ka anyị wee nwee ike ịgbanye ozi ga-enyere anyị aka kee usoro ntughari.
Usoro metrik n'ime ụdị ọ bụla
Ọ bụ ezie na edemede ndị ahụ na-akọwapụta onwe ha nke ọma, usoro metrik nke kwesịrị ịlele n'ime ụdị nke ọ bụla anaghị apụta ìhè mgbe niile. Ka anyị lelee ụdị metrik dị iche iche n'ime ụdị ọ bụla:
onye: Ọ bụ ezie na onye ọ bụla ga-achọ ịma kpọmkwem njirimara nke bịara na saịtị ha, anyị enweghị ike ịnweta ozi ahụ mgbe niile. Agbanyeghị, enwere ngwaọrụ, dị ka nyocha adreesị IP, nke nwere ike inyere anyị aka imechi oke. Uru kasịnụ nke nyocha IP bụ na ọ nwere ike ịgwa anyị ụlọ ọrụ na-eleta saịtị gị. Y’oburu n’inwe ike ighota IP ndi ichoro na saiti gi, igha abia otu uzo iji mata onye Ọkarị nchịkọta Ngwaọrụ anaghị enye ozi a.
Gịnị mere: Kedu ihe kpatara mmadụ ji bịa na saịtị bụ ihe gbasara mmadụ, mana enwere ọnụọgụ ọnụọgụgụ nke anyị nwere ike iji nyere aka chọpụta ihe kpatara ha. Offọdụ n'ime ndị a gụnyere: ibe eleta, oge ejiri na ibe ndị ahụ, ụzọ ntụgharị (ọganihu nke ibe ha gara na saịtị ahụ) na isi mmalite ozi ma ọ bụ ụdị okporo ụzọ. Site na ịlele metrics ndị a, ị nwere ike ịme ụfọdụ echiche ziri ezi banyere ihe mere onye ọbịa ji bịa na saịtị gị.
Kedu: Kedu otu onye ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ si chọpụta na ị nwere ike igosipụta SEM ma ọ bụ mgbalị mmekọrịta gị. I lee anya n’etu aga esi gosi gi ebe mgbali gi na aru oru, ma o g’egosikwa gi ebe izi ozi di nke oma. Ọ bụrụ na mmadụ hụrụ gị site na nchọta Google ma ha pịa njikọ gị, ị maara na ihe dị n'asụsụ gị kwaliri ha ime ya. Primarykpụrụ ndị bụ isi ebe a bụ ụdị okporo ụzọ ma ọ bụ isi mmalite.
Kedu: Ihe ndị ọbịa lere anya nwere ike bụrụ nke doro anya na edemede ndị a. Metkpụrụ kachasị dị ebe a bụ peeji ndị eleta, ị nwere ike ikpebi ọtụtụ ihe na ozi ahụ.
ebe: N’ikpeazụ, ebe onye ọbịa bịara pụrụ ịgwa gị ebe ha kwụsịrị inwe mmasị. Lelee peeji nke ọpụpụ ma hụ ma enwere ibe ọ bụla na-abịa. Gbanwee ọdịnaya na ibe ahụ ma debe honing, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ peeji ọdịda. Nwere ike n'ozuzu nweta ebe onye ọbịa bịara nchịkọta ngwaọrụ dika Google Analytics na ngalaba ntughari uzo.
You na-elele nke ọ bụla n'ime edemede ndị a ma na-edozi ọdịnaya gị ma ọ bụ weebụsaịtị dabere na data na-alọghachi? Ọ bụrụ na enyochare gị na arụmọrụ nke webụsaịtị gị, ị kwesịrị ịdị.
Tags: usoro nyochainbound marketingmetrics